မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2015-04 > ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အပိုင်း (6)
ယေဘုယျအားဖြင့်ဘုရားကျောင်းနှင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အကြားဆက်နွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှုထောင့်သုံးခုရှိသည်။ ၎င်းသည်သမ္မာကျမ်းစာဖွင့်ပြခြင်းနှင့်ခရစ်တော်၏ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်လုပ်ဆောင်မှုအပြင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားအပြည့်အဝထည့်သွင်းထားသောဘာသာရေးနှင့်ကိုက်ညီသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ဓမ္မ၌ဂျော့ခ်ျလတ်ဒ်ပြောခဲ့သည့်စကားနှင့်အညီဖြစ်သည်။ သောမတ်စ်အက်ဖ် Torrance ကဤအယူဝါဒကိုထောက်ခံရန်အရေးကြီးသောကောက်ချက်အချို့ကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ပြီးအချို့ကဘုရားကျောင်းနှင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ အခြားသူများကမူနှစ်ခုလုံးကိုကွဲပြားခြားနားသည်၊ လုံးဝသဟဇာတမဖြစ်ဟုမြင်သည်1.
သမ္မာကျမ်းစာမှတ်တမ်းကိုအပြည့်အ ၀ နားလည်နိုင်ရန် Ladd လုပ်ခဲ့သည့်ကျမ်းချက်များနှင့် subtopics များစွာကိုထည့်သွင်း။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုအပြည့်အ ၀ ဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤအချက်ကို အခြေခံ၍ သူသည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်တူညီခြင်းမရှိသော်လည်း ခွဲခြား၍ မရသောသီအိုရီကိုထောက်ခံသည့်တတိယမြောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုတင်ပြခဲ့သည်။ သူတို့ထပ်နေတယ် ဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ပြရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာဘုရားကျောင်းသည်ဘုရားသခင့်လူမျိုးဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုလက်ခံသောသူတို့သည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သားများဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ဘုရားသခင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်မှတစ်ဆင့်ဘုရားသခင်၏ပြီးပြည့်စုံသောအုပ်ချုပ်မှုနှင့်တူညီသောဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရပါ။ နိုင်ငံတော်သည်ပြီးပြည့်စုံသော်လည်းအသင်းတော်သည်မပြည့်စုံပါ။ ဘာသာရပ်များသည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ဘုရင်ယေရှုခရစ်၏လက်အောက်ခံများဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ဘုရင်ကိုယ်တိုင်နှင့်မရောထွေးသင့်ပါ။
ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အောက်၌ - မပြည့်စုံပါ
Das Neue Testament weist jedoch darauf hin, dass dieses Volk nicht vollkommen, nicht mustergültig ist. Dies wird besonders im Gleichnis von den im Netz gefangenen Fischen deutlich (Matthäus 13,47-49). Die sich um Jesus und sein Wort versammelte Kirchengemeinde wird schlussendlich einem Scheideprozess unterworfen sein. Es wird eine Zeit kommen, in der deutlich wird, dass sich einige, die sich dieser Gemeinde zugehörig fühlten, Christus und dem Heiligen Geist gegenüber nicht empfänglich zeigten, sondern sie vielmehr geschmäht und sich ihrer verwehrt haben. Das heisst, einige, die zur Gemeinde gehörten, haben sich nicht unter dieHerrschaft Christi gestellt, sondern sich der Busse widersetzt und der Gnade von Gottes Vergebung und der Gabe des Heiligen Geistes entzogen. Andere haben Christi Wirken in freiwilliger Unterordnung unter sein Wort wankelmütig aufgenommen. Alle müssen sich jedoch dem Glaubenskampf jeden Tag aufs Neue stellen. Es sind alle angesprochen. Alle sollten sich, sanft geleitet, dem Wirken des Heiligen Geistes stellen, mit uns die Heiligung zu teilen, die Christus selbst in Menschengestalt für uns teuer erkaufte. Eine Heiligung,die danach verlangt, täglich unser altes, falsches Ich ersterben zu lassen. Das Leben dieser Kirchengemeinde ist also vielgestaltig, nicht vollkommen und rein. Die Kirche sieht sich darin fortwährend von der Gnade Gottes getragen. Die Glieder der Kirche machen den Anfang, wenn es gilt, Busse zu tun, und wird dabei beständig erneuert und reformiert.Die im Neuen Testament verbreitete Lehre verweist in weiten Teilen auf einen fortwährenden Erneuerungsprozess, der mit Busse, Glauben, Erkenntnisgewinn, Gebet, dem Widerstehen von Versuchungen, sowie Besserung und Wiederherstellung, das heisst, Versöhnung mit Gott, einhergeht. Nichts davon wäre notwendig, wenn die Kirche schon jetzt ein Bild der Vollkommenheit abzugeben hätte. So wie sich dieses dynamische, von Weiterentwicklung geprägte Leben manifestiert, stimmt es wunderbar mit dem Gedanken überein, das Reich Gottes offenbare sich nicht in dieser Weltzeit in seiner ganzen Vollkommenheit. Es ist das Volk Gottes, das voller Hoffnung wartet – und das Leben eines jeden, der ihm angehört,in Christus verborgen (Kolosser 3,3) und gleicht gegenwärtig gewöhnlichen, irdenen Gefässen (2. ကောရိန္သု 4,7). Wir warten auf unser Heil in Vollkommenheit.
Es gilt mit Ladd festzuhalten, dass die ersten Apostel den Brennpunkt in ihren Predigten nicht auf die Kirche setzten, sondern auf das Reich Gottes. Jene,die ihre Botschaft annahmen, waren es dann, die als Kirche, als Christi ekklesia, zusammenfanden. Das heisst, dass die Kirche, das Volk Gottes, nicht Gegenstand des Glaubens oder der Anbetung ist. Allein der Vater, Sohn und Heilige Geist, der dreieine Gott ist dies. Das Predigen und die Lehre der Kirche sollten sich nicht selbst zum Objektdes Glaubens machen, sich also nicht vorrangig um sich selbst drehen. Deshalb betont Paulus, dass «[wir] nicht uns selbst verkündigen [...], sondern Jesus Christus als den Herrn, uns selbst aber als eure Knechte, um Jesu willen» (2. ကောရိန္သု 4,5; Zürcher Bibel). Botschaft und Wirken der Kirche sollten nicht auf sich selbst verweisen, sondern auf die Herrschaft des dreieinigen Gottes, die Quelle ihrer Hoffnung. Gott wird seine Herrschaft der ganzen Schöpfung angedeihen lassen, eine Herrschaft, die von Christus durch sein irdisches Wirken, sowie von der Ausgiessung des Heiligen Geistes begründet wurde, jedoch erst dereinst in Vollkommenheit erstrahlen wird. Die sich um Christus scharende Kirche schaut zurück auf sein abgeschlossenes Erlösungswerk und voraus auf die Vollendung in Vollkommenheit seines fortdauernden Wirkens. Darin liegt ihr wahrer Fokus.
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်နှင့်ချာ့ချ်ကိုခွဲခြားသိမြင်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင့်အမှုတော်နှင့်လက်ဆောင်တော်များကိုတိတိကျကျပြောရခြင်းမှာထင်ရှားသည်။ ဘုရားသခင်နှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းအသစ်ကိုမျှဝေသူများပင်၎င်းကိုလူသားများမတည်ဆောက်နိူင်ပါ။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းအရလူတို့သည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်တွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်၊ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်၊ အမွေခံနိုင်သည်။ သို့သော်သူတို့သည်မဖျက်ဆီးနိုင်၊ သငျသညျနိုငျငံတျောအဘို့အရာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်ပေမယ့်ဘယ်တော့မှလူ့အဖွဲ့အစည်းမှဘာသာရပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Ladd ကဤအချက်ကိုအလေးအနက်ထားအလေးပေးပြောကြားသည်။
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်သော်လည်းအပြည့်အ ၀ မဖွင့်နိုင်သေးပါ။ Ladd ၏စကားများအရ `၎င်းသည်ရှိပြီးဖြစ်သည်၊ သို့သော်မပြီးသေးပါ။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်အပြည့်အဝအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ဘုရားသခင့်လူမျိုးတော်၏လူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းနှင့်မသက်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေလူသားအားလုံးသည်ဤခေတ်၌စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ယေရှုခရစ်ပတ် ၀ န်းကျင်၌စုရုံးရောက်ရှိနေသူများ၏ ၀ ိညာဉ်ရေးရာနှင့်သာသနာပြုလုပ်ငန်းများသည်ပြproblemsနာများနှင့်ကန့်သတ်ချက်များမှလွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ အပြစ်နှင့်သေခြင်း၌ဆက်ကပ်ခံရဖို့ဆက်လက်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်စဉ်ဆက်မပြတ်သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့်ပြန်လည်အားဖြည့်ခြင်းတို့ကိုလိုအပ်သည်။ သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်အောက်၌မိမိကိုယ်ကိုနေရာချခြင်း၊ ခွန်အားပြည့်ဝ။ အသစ်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်သနားခြင်းကရုဏာတော်ဖြင့်ချီးမြှောက်ခြင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်နှင့်အဆက်မပြတ်တည်နေရမည်။ Ladd ကဤဖော်ပြချက်ငါးခု၌ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အကြားဆက်ဆံရေးကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြခဲ့သည်။2
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်တွင်ဘုရားသခင်၏လူများပါဝင်သည်။ သို့သော်ချာ့ချ်နှင့်ဆက်နွယ်သူအားလုံးသည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အပေါ်ခရစ်တော်၏အုပ်စိုးမှုကိုအကြွင်းမဲ့လက်အောက်ခံခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင့်လူမျိုးတော်သည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သို့ ၀ င်ရောက်ပြီးခရစ်တော်၏ခေါင်းဆောင်နှင့်အုပ်စိုးမှုကိုလက်အောက်ခံသူများနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ တစ်ချိန်ချိန်၌ဘုရားကျောင်းသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့ကြသူအချို့သည်လက်ရှိနှင့်လာမည့်နိုင်ငံတို့၏အကျင့်စရိုက်ကိုကောင်းစွာရောင်ပြန်ဟပ်မည်မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင့်ကျေးဇူးတော်ကိုသူတို့အသင်းတော်ကဓမ္မအမှုအားဖြင့်ပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်နှင့်ချာ့ချ်သည်မတူကွဲပြားစွာဆက်စပ်လျက်ရှိသည်၊ သို့သော်မတူပါ။ အကယ်၍ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာသောအခါအပြည့်အဝပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါကဘုရားသခင့်လူမျိုးသည်ခြွင်းချက်မရှိမိမိအုပ်ချုပ်မှုကိုလက်အောက်ခံလိမ့်မည်။ ဤအမှန်တရားသည်လူအားလုံး၏အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုတွင်အပြည့်အဝထင်ဟပ်လိမ့်မည်။
ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏ခြားနားမှုနှင့် ခွဲခြား၍ မရသောနှစ် ဦး စလုံး၏သိသာထင်ရှားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုမှာဘုရားကျောင်းသည်အနာဂတ်နိုင်ငံတော်၏ထင်ရှားသောသရုပ်သကန်ကိုကိုယ်စားပြုသင့်သည်။ သောမတ်စ်အက်ဖ် Torrance ကဤအချက်ကိုသူ၏သင်ကြားမှုတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်စုံလင်ခြင်းသို့မရောက်သေးသော်လည်း၊ ယနေ့ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်ပြည့်စုံခြင်းမရှိသေးသော်လည်းလက်ရှိဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်နေ့စဉ်အသက်တာ၌ကိုယ်ခန္တာကိုယ်၌သက်သေခံရန်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်စုံလင်ခြင်းသို့မရောက်ရှိသေးသောကြောင့်ဘုရားကျောင်းသည်ယခုနှင့်ယခုတွင်တွေ့ကြုံခံစား။ မရနိုင်သော ၀ ိညာဉ်ရေးရာအဖြစ်အပျက်မျှသာဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ခရစ်တော်နှင့်အတူတကွ ပူးပေါင်း၍ ဘုရားသခင့်လူမျိုးသည်လာမည့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အကြောင်းလေ့လာခြင်းအားကမ္ဘာနှင့်အချိန်၊
ချာ့ချ်သည်ယင်းကိုလုံးလုံးလျားလျားမဖြစ်စေ၊ သို့သော်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်သခင်ဘုရားနှင့်အတူဘုရားသခင့်လူမျိုးတော်သည်အနာဂတ်နိုင်ငံတော်၏ကောင်းကျိုးများကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြနိုင်ကြသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အပြစ်၊ ဘေးနှင့်သေခြင်းကိုကျော်လွှားနိုင်ပြီးအနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကိုအမှန်တကယ်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ ၎င်း၏အရေးကြီးဆုံးလက္ခဏာသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌အထမြောက်စေသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ခမည်းတော်အားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌သားတော်အပေါ်ထားရှိသောချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်သားတော်အားဖြင့်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ခမည်းတော်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ချာ့ချ်သည် ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၌၎င်း၊ နေ့စဉ်အသက်တာ၌လည်းကောင်း၊ ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်မသက်ဆိုင်သောသူများ၏သာယာကောင်းကျိုးအတွက်လည်းကောင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်၏အုပ်ချုပ်မှုကိုသက်သေပြနိုင်သည်။ ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်ဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်း၌ ၀ ိညာဉ်တော်၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရဤအဖြစ်မှန်နှင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှပေးသောထူးခြားချက်နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်အများဆုံးသက်သေထွက်ဆိုချက်မှာသန့်ရှင်းသောသဟာယဖွဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤတွင်အသင်းတော်များမှစုစည်းထားသောဘုရားရှိခိုးကျောင်းများအကြားခရစ်တော်၌ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်နှင့်သက်ဆိုင်သောအခိုင်မာဆုံး၊ အရိုးရှင်းဆုံး၊ သူ၏ယဇ်ပလ္လင်တွင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်သည်သူ၏ပုဂ္ဂိုလ်မှတစ်ဆင့်ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သော၊ ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိသေးသောခရစ်တော်အုပ်ချုပ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံခံစားရသည်။ သခင်ဘုရား၏စားပွဲ၌လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံခြင်းအားပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သူနှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကိုမျှော်လင့်လျက်ရှိပါသည်။ အကြောင်းမှာသူသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏စွမ်းအားတော်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူ၏ယဇ်ပလ္လင်တွင်ကိုယ်တော်၏လာမည့်နိုင်ငံတော်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည်။ သူသည်ငါတို့သခင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်မည်ဟုကတိပြုထားသည့်အတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုစားရန်သခင်၏စားပွဲသို့လာသည်။
ဘုရားသခငျသညျကြှနျုပျတို့တစျ ဦး နှငျ့အတူမပွုပါ
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဘုရားကျောင်းအသိုင်းအဝိုင်း၏ရှေ့နောက်မညီမှုများသည်လူတိုင်း၏ခေါင်းဆောင်မှုတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ အချို့သောလက်တွေ့ကျကျစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာများကိုဤနည်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်ဖြစ်သော်လည်းယင်း၏သဘောသဘာဝအရချာ့ချ်သည်အမှန်တကယ်ဒီမိုကရေစီမကျပါ။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်းဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်ပါ ၀ င်သောကျမ်းပိုဒ်များစွာတွင်ဖော်ပြထားသောအစောပိုင်းခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်း၌အသုံးပြုသောချာ့ချ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းသည်ရှင်းလင်းသောစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီရမည်။ ချာ့ချ်ခေါင်းဆောင်မှုသည်ဝိညာဉ်ရေးရင့်ကျက်မှုနှင့်ဉာဏ်ပညာ၏ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လက်နက်လိုအပ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာအပေါ် အခြေခံ၍ ခရစ်တော်မှတစ်ဆင့်ဘုရားသခင်နှင့်သူ၏ဆက်ဆံရေးတွင်ရင့်ကျက်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်ရမည်။ လက်တွေ့ကျသောအကောင်အထည်ဖော်မှုကိုစိတ်ရင်းမှန်၊ ရွှင်လန်းမှုနှင့်လွတ်လပ်သောဆန္ဒ၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်အစေခံရန်ချစ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။
နောက်ဆုံး၌သို့သော်၊ ၎င်းသည်အရေးအကြီးဆုံးသောအရာဖြစ်သည်။ ချာ့ချ်၏ခေါင်းဆောင်မှုသည်ခရစ်တော်မှသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှတစ်ဆင့်လာရောက်ခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်ဤခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်အထူး ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ဤခန့်အပ်ခြင်းများကိုလိုက်နာရန်အခြားသူများကအတည်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်အချို့ကိုခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်အခြားသူများကိုအမြဲတိကျစွာဖော်ပြမရနိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ကြီးမားသော ၀ ိညာဉ်ရေးရင့်ကျက်မှုရရှိခြင်းကိုလျစ်လျူရှုခံထားရသူအချို့သည်ချာ့ချ်၏ ဦး ဆောင်မှုအောက်တွင်တရား ၀ င်သန့်ရှင်းသောရာထူးများရရှိရန်မခေါ်ခဲ့ပေ။ ဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူခြင်း (သို့) မပြုလုပ်ခြင်းသည်သူတို့၏ဘုရားသခင့်လက်ခံမှုနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ ယင်းသည်ဘုရားသခင်၏မကြာခဏကွယ်ဝှက်ထားသောဉာဏ်ပညာအကြောင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ဖော်ပြထားသောစံနှုန်းများကို အခြေခံ၍ ခေါ်ဆိုခြင်း၏အတည်ပြုချက်သည်သူတို့၏အကျင့်စရိုက်၊ သူတို့၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်သူတို့၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်စွမ်းရည်ကိုအကဲဖြတ်ခြင်း၊ ခရစ်တော်၌သူတို့၏ယုံကြည်မှုအပေါ်ဒေသခံဘုရားရှိခိုးကျောင်းများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ တပ်ဆင်နှင့်အားပေးရန်။
Das Leben zwischen den beiden Kommen Christi schliesst die Notwendigkeit einer angemessenen Kirchenzucht nicht aus, aber es muss sich um eine klug wahrnehmbare, geduldige, mitfühlende und überdies langmütige Zucht (liebevoll, stark, erzieherisch) handeln, die angesichts von Gottes Liebe allen Menschen gegenüber auch von Hoffnung für alle getragen ist. Sie wird es jedoch Gemeindegliedern nicht erlauben, ihre Glaubensbrüder und -schwestern zu drangsalieren (Hesekiel 34), sondern vielmehr danach trachten, sie zu schützen. Sie wird den Mitmenschen Gastlichkeit, Gemeinschaft, Zeit und Raum zuteilwerden lassen, auf dass diese Gott suchen und nach dem Wesen seines Reiches trachten, Zeit zur Busse finden, Christus in sich aufnehmen und sich ihm im Glauben immer mehr zuneigen. Aber es wird Grenzen des Erlaubten geben, u.a. wenn es gilt, gegen andere Gemeindeglieder gerichtetem Unrecht nachzugehen und es einzudämmen.Wir sehen diese Dynamik im frühen Kirchenleben, wie es im Neuen Testament aufgezeichnet wurde, am Wirken. Die Apostelgeschichte und die Briefe des Neuen Testamentes bezeugen diese internationale Ausübung von Kirchenzucht. Sie erfordert eine kluge und einfühlsame Führung. Es wird jedoch nicht möglich sein, darin Vollkommenheit zu erlangen. Es muss dennoch danach gestrebt werden, weil die Alternativen Disziplinlosigkeit oder aber unbarmherzig verurteilender, selbstgerechter Idealismus Irrwege sind und Christus nicht gerecht werden.Christus nahm alle an, die zu ihm kamen, aber nie beliess er sie so, wie sie waren. Vielmehr wies er sie an, ihm nachzufolgen. Einige gingen darauf ein, andere nicht. Christus akzeptiert uns, wo immer wir stehen mögen, aber er tut dies, um uns zu seiner Nachfolge zu bewegen. Beim kirchlichen Wirken geht es um Empfangen und Willkommen Heissen, aber auch um die Führung und Disziplinierung derer, die bleiben, auf dass sie Busse tun, auf Christus vertrauen und ihm in seinem Wesen folgen. Obwohl als gleichsam letzte Option die Exkommunizierung, (der Ausschluss aus der Kirche) notwendig sein mag, sollte sie getragen sein von der Hoffnung, auf eine künftige Wiederaufnahme in die Kirche, wie uns Beispiele aus dem Neuen Testament(1. ကောရိန္သု 5,5; 2. ကောရိန္သု 2,5စာ-၁၀; ဂလာတိ 6,1) belegen.
ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အကြားခြားနားချက်နှင့်ဆက်နွယ်မှု၏နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တစ်ခုမှာဒေသနာသတင်းစကားသည်ခရစ်တော်၏ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုသာမကလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်၌သူ၏ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်ကိုသာရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း၌ပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့သမျှသည်သမိုင်းတွင်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအားလုံးကိုမဖွင့်ဟသေးကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းစကားကညွှန်ပြသင့်သည်။ သူ၏မြေကြီးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသည်ပြီးပြည့်စုံသောကမ္ဘာကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်သေးပါ။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ဘုရားသခင့်စံနမူနာကိုသဘောပေါက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသော g ၀ ံဂေလိတရားသည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ဖြစ်သည်ဟုလူတို့အားမယုံကြည်စေသင့်ပါ။ ၎င်း၏စံပြ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မက်ဆေ့ခ်ျနှင့်ပုံသက်သေတွင်အနာဂတ်ခရစ်တော်၏နိုင်ငံတော်အတွက်မျှော်လင့်ချက်စကားလုံးပါ ၀ င်သင့်သည်။ ဒါဟာဘုရားကျောင်းကွဲပြားခြားနားသောလူများ၏ဖွဲ့စည်းထားကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သင့်သည်။ နောင်တရခြင်းနှင့်အသစ်ပြုပြင်ခြင်း၊ ယုံကြည်ရန်၊ မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းခံရသောသူများ။ ခရစ်တော်သည်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေသတ်ခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်အာမခံသောအသီးဖြစ်သည်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၌နေ့စဉ်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၌တည်ရှိမည့်လူများနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်၊ အနန္တတန်ခိုးရှင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ခရစ်ယာန်အုပ်ချုပ်မှုပြီးဆုံးသွားလိမ့်မည်။
သို့သော်ခရစ်ယာန်ဘာသာသည်အနန္တတန်ခိုးရှင်၏အကူအညီဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသောအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ကမ္ဘာကြီးကိုနားလည်သဘောပေါက်သောဘုရားသခင်၏ပြီးပြည့်စုံသောလူများဖြစ်လာရန်မဟုတ်ပါ။ ဤခရစ်ယာန်ဘာသာပုံစံ၏ပုံစံသည် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးသားဖြောင့်မှန်လျှင်၊ သစ္စာရှိရှိ၊ ကျူးလွန်သော၊ အစွန်းရောက်သော၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုပြည့်မီအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါကဘုရားသခင်သည်မိမိလူမျိုးကိုအလိုရှိသည့်စံနမူနာကိုရရှိနိုင်သည်ဟုအခိုင်အမာဆိုထားသည်။ ချာ့ချ်သမိုင်းတစ်လျှောက်ထိုသို့တစ်ခါမျှမဖြစ်ခဲ့ဖူးသောကြောင့်စိတ်ကူးယဉ်ဝါဒီများသည်မည်သူကိုမည်သူအပြစ်တင်သင့်ကြောင်းအတိအကျသိထားကြသည် - သူတစ်ပါး၊ ခရစ်ယာန်ဟုလည်းခေါ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်သို့သော်အပြစ်ရှိသည်မကြာခဏပင်ထိုစံပြကိုအောင်မြင်ရန်မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းတွေ့မြင်ကြသောစိတ်ကူးယဉ်ဝါဒီများကိုယ်တိုင်အပေါ်ကျရောက်ပြန်သည် ထိုသို့ဖြစ်လာသည့်အခါစိတ်ကူးစံဝါဒသည်မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုစွပ်စွဲခြင်းများသို့ကျရောက်သွားသည်။ angel ၀ ံဂေလိအမှန်တရားကအနန္တတန်ခိုးရှင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အနာဂတ်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏ကောင်းချီးများသည်ယခုဆိုးယုတ်သောခေတ်သို့ ၀ င်ရောက်နေပြီဟုကတိပေးထားသည်။ ထိုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ခရစ်တော်ပြုပေးခဲ့သောအရာမှယခုအကျိုးကျေးဇူးရရှိပြီး၊ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အပြည့်အဝမပြည့်စုံမီကောင်းချီးများကို လက်ခံ၍ ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လာလတံ့သောနိုင်ငံ၏theကန်အမှန်ဖြစ်ခြင်းကိုအာမခံသောအရေးကြီးဆုံးသောသက်သေမှာအသက်ရှင်ခြင်း၊ သေခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သူသည်သူ၏အနာဂတ်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မည်ဟုကတိပေးခဲ့ပြီးယခုဆိုးယုတ်သောလောက၌ကြိုတင်မြည်းစမ်းခြင်း၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပထမ ဦး ဆုံးအသီးများ၊ လာမည့်နိုင်ငံတော်၏အမွေကိုသာမျှော်လင့်ရန်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်၏မျှော်လင့်ချက်အကြောင်းဟောပြောရပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အကြားခြားနားချက်ကိုအလေးပေးဖော်ပြခြင်းဖြင့်တချိန်တည်းမှာပင်ခရစ်တော်၌သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အချင်းချင်းနှင့်သူတို့၏ဆက်နွယ်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်သက်သေခံများအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်း၊
အချုပ်အားဖြင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အကြားကွာခြားချက်နှင့်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေလက်ရှိတည်ရှိနေသောဆက်နွယ်မှုအားဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည် ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း (သို့) ယုံကြည်မှုတစ်ခုမဖြစ်သင့်ဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပြီး၊ ယင်းအစား၎င်းသည်ခရစ်တော်နှင့်သူ၏သာသနာပြုလုပ်ငန်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ သူသည်ထိုတာ ၀ န်၌ပါ ၀ င်သည်။ သူသည်နှုတ်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ အပြုအမူအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ခရစ်တော်၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြ။ ခရစ်တော်၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုသတ္တဝါသစ်များဖြစ်စေသည်။ ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စကြာ ၀ ofာကိုထာဝရရှင်နှင့်ရွေးနှုတ်သောသခင်သည်ပြန်လာသောအခါ။
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်နှင့်ခရစ်တော်၏အုပ်စိုးမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်နွယ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့အားနားလည်စေရန်နောက်ဆုံးသောအရာတစ်ခုမှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှု၏မြေကြီးဓမ္မအမှုသည်သူ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်အဆုံးသတ်သည်မဟုတ်ဘဲကောင်းကင်သို့တက်ကြွခြင်းနှင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအခြားနည်းဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်ရန်သူသည်ကမ္ဘာမြေနှင့်လက်ရှိကမ္ဘာကိုစွန့်ခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သူသည်အဝေးနှင့်မဝေးပါ။ သူကတစ်လမ်းထဲမှာရှိနေပေမယ့်ဖြစ်စေလမ်းအတွက်မဟုတ်။
ဂျွန်ကယ်လ်ဗင်ကခရစ်တော်သည်“ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းလမ်းဖြင့်ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်” ဟုပြောခဲ့သည်။3 Jesus deutet auf seine Abwesenheit hin, die ihn auf gewisse Weise von uns trennt, indem er seinen Jüngern sagt, er werde fortgehen, um einen Ort vorzubereiten, an den sie ihm noch nicht folgen könnten. Er werde mit dem Vater auf eine Weise zusammen sein, wie er es während seiner Zeit auf Erden nicht vermochte (Johannes 8,21; 14,28). Er weiss, dass seine Jünger dies als Rückschlag empfinden mögen, weist sie jedoch an, es als Fortschritt und somit ihnen dienlich zu betrachten, selbst wenn damit noch nicht das zukünftige, ultimative und vollkommene Wohl gegeben ist. Der Heilige Geist, der ihnen gegenwärtig war, werde weiterhin bei ihnen sein und ihnen innewohnen (Johannes 14,17). Jesus verheisst jedoch auch, dass er zurückkehren werde und zwar auf dieselbe Weise, wie er die Welt verliess – in Menschengestalt, körperlich, sichtbar (Apostelgeschichte 1,11). Seine gegenwärtige Abwesenheit kommt dem noch nicht vollendeten Reich Gottes gleich, das somit auch gleichsam noch nicht in Vollkommenheit präsent ist. Die gegenwärtige, böse Weltzeit befindet sich in einem Stadium des Vergehens, des Aufhörens zu bestehen (1. ကော7,31; 1. ဂျိုဟန် 2,8; 1. ဂျိုဟန် 2,1).Alles unterliegt gegenwärtig dem Prozess der Überantwortung der Macht an den regierenden König. Wenn Jesus jene Phase seines fortdauernden, geistlichen Wirkens beendet, wird er wiederkehren und seine Weltherrschaft wird vollkommen sein. Alles, was er ist und was er getan hat, wird dann jedermann offen vor Augen stehen. Alles wird sich ihm gegenüber beugen, und jeder wird die Wahrheit und die Realität dessen, wer er ist, anerkennen (Philipper 2,10). Erst dann wird sein Werk in seiner Ganzheit offenbar werden.Somit deutet seine Entrücktheit auf etwas Wichtiges hin, das mit der übrigen Lehre im Einklang steht. Während er nicht auf Erden ist, wird das Reich Gottes nicht überall anerkannt werden. Auch Christi Herrschaft wird nicht in vollem Umfang offenbar werden, sondern weitgehend verborgen bleiben. Viele Aspekte der gegenwärtigen, sündigen Weltzeit werden weiterhin zum Tragen kommen, sogar zu Lasten jener, die sich als die Seinen, die Christus angehören, ausweisen und sein Reich sowie sein Königtum anerkennen. Leid, Verfolgung, Böses – sowohl moralisch (von Menschenhand verübt) als auch natürlich (infolge der Sündhaftigkeit alles Seins selbst) – wird fortdauern. Das Böse wird in einem Masse bleiben, dass es vielen so erscheinen mag, als habe Christus nicht den Sieg davongetragen und sein Reich stünde nicht über allem.
ဒေါက်တာထံမှ Gary Deddo
1 လတ်ဒ်၏ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ဓမ္မ၊ စစ။ ၁၀၅-၁၁၉ တွင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါမှတ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
2 Ladd စစ။ 111-119 ။
3 Calvins Kommentar zum 2. ကောရိန္သု 2,5.